Ukubhalwa kweMigaqo kaMasipala kunye nokuQulunqa iNdiventi entsha
Izinto Ozoziqwalasela Xa Udala IQumrhu
Ukuba ucinga ngokuqala iqela lePagan okanye i-Wiccan isivumelwano sakho , into enye ama-covens amaninzi afumana luncedo kwisakhiwo. Indlela efanelekileyo yokugcina izinto ezicwangcisiweyo kwisicwangciso sokubambisana kufuneka zibe nesethi ebhaliweyo yamagunya, okanye iiplawla zomgaqo-nkqubo. Imithetho yedolophu ingadalwa ngumPristi OPhezulu okanye uMbingeleli oPhezulu, okanye ingabhalwa yikomiti, kuxhomekeke kwimithetho yesithethe sakho. Ukuba uyakha isithethe esitsha, okanye uhambo lwakho luhlobo lwe-eclectic, ngoko uya kufuneka unqume ukuba ubani ophetheyo yokubhala imiyalelo yomgaqo-nkqubo.
Nanini na xa unamaqela abantu behlangana kunye nenjongo efanayo, soloko kuluvo oluhle lokuba nolunye uhlobo lwezikhokelo malunga nendlela abo bantu baza kusebenzisana ngayo. Ingaba kukho isivumelwano seWiccan, iqela lokuqokelela izitembu okanye i-PTA, imilawuni inika umqondo wokuqhubeka kuwo onke amalungu.
Imiyalelo yeqela lakho iyakwazi ukuguquka kwaye iguquke, kwaye kulungile. Okanye, bangasetyenziselwa ukusuka kwiSuku Lunye kwaye abazange bahlonyelwe ngenxa yokuba iqela alingazi ukuba lilungiswe. Kwakulungile. Wonke amaqela ahluke, kwaye kubalulekile ukuza nemithetho emiselweyo eyona nto iya kulungelelanisa ngakumbi iimfuno zesinye isivumelwano sakho.
Nangona akudingeki ukuba ufake yonke yale nto kwiimigaqo-nkqubo yakho yesivumelwano, zizinto onokunqwenela ukuziqwalasela. Indlela oyithetha ngayo iya kuxhomekeka kwiimfuno zeqela lakho ngalinye.
Iyintoni injongo yokusekwa kweqela lakho? Kungaba yinto elula, njengeyiphi isithethe olandelayo okanye oothixo obahlonelayo, okanye ingaba nzima, ukuba iqela lakho liceba ukwenza imisebenzi echaphazelekayo.
Injongo yeCandelo leZiThathu zeeNgqungquthela kukuhlonela oothixo kunye noothixokazi bama-Celtic, kunye nokubhiyozela amaxesha enyaka ngokuhambelana neGeyi yamaPagane oNyaka.
I-mission ye-Standing Stones Coven kukunceda uluntu malunga nePaganism yanamhlanje, kwaye likhonza njengeqela lokufikelela ekunikezeni izixhobo kubasemagunyeni kunye nabangewona amaPagan endaweni yethu.
Ubulungu kunye noLwakhiwo
Ngubani oya kuvunyelwa kwiqela? Ngaba zikhona iimfundo ezithile ezifunekayo? Ziziphi iimfuno ezikhoyo zokuhlala ilungu? Ngaba kukho inkqubo yokuqalisa? Qinisekisa ukuba ucacise yonke le ngcaciso ngaphambi kokuba iqela lenziwe - awufuni nantoni na into engacacile malunga nokuba ngaba umntu ahlangane neemfuno zobulungu. Kuye kuwe ukuba uthatha onke amaqela anomdla, nokuba ngaba kukho ukuvota nokukhetha inkqubo, kodwa nayiphi na into oyikhethayo, kufuneka uyibeke kwimigqaliselo yakho yesivumelwano. Ngaba zikhona ii-ofisi ezahlukeneyo kwiqela lakho, njengoNobhala, uMgcini-mali, okanye enye indima? Ngubani oza kugcwalisa la malungu, kwaye baya kukhethwa njani?
Nangona akudingeki ukuba ufake imihla ethile kwimigqaliselo yakho ye-coven - kwaye eneneni, ndiyakumcebisa malunga nayo - yinto efanelekileyo yokucacisa ukuba ngamalungu amaninzi kulindeleke ukuba adibane. Ngaba uya kudibana ngekota? Ngenyanga? KwiSabatha nganye kunye nenyanga epheleleyo? Ukuseka oku kwangaphambi kwexesha-ngaloo ndlela, amalungu aya kuqonda oko kulindeleke kubo. Ukuba kukho imfuneko yokuhamba, qiniseka ukuba ufake le miyalelo yakho.
Iinqumfa ezintathu zeConven ziya kuhlangana namaxesha alishumi elinambini ngonyaka. Eyesibhozo kulezo ntla nganiso ziya kubanjelwa ngeSigan Sabbats, kunye neentlanganiso ezine eziseleyo eziza kubanjwa kuMbingeleli oPhakamileyo. Amalungu aya kunikwa ishedyuli kunye nemihla yomhlangano weshumi elinambini ekuqaleni kwonyaka ngamnye wekhalenda. Amalungu kufuneka acwangcise ukuhamba okungenani ezisibhozo kwiintlanganiso ezilishumi elinesibhozo ngonyaka; Amalungu ahlala engekhoyo angacelwa ukuba acinge ngokuzibophezela kwabo kwiCandelo leZiThathu zeeNgqungquthela.
Imigaqo neMithetho yeNkolelo
Yonke inkolelo yemilingo kufuneka ibe nolunye uhlobo lwezikhokelo. Kwabanye, kunzima kakhulu, kulandela uluhlu oluthile lwemithetho nemimiselo. Kweminye imizila, isichazwa ngokungaqhelekanga, apho amalungu anikezelwa uludwe olubanzi lwezikhokelo kwaye alindele ukuwuchaza ngendlela yabo.
Imizekelo yeminye imithetho ongathanda ukuyiquka:
I-Circle Three Coven inomgaqo-nkqubo wokunyamezela iZero malunga naluphi na ukusetyenziswa kwezidakamizwa zokuzonwabisa okanye ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo kotywala okanye iteksi. Amalungu abeya kwimikhosi okanye imikhosi phantsi kwefuthe leziyobisi ezingekho mthethweni baya kucelwa ukuba bashiye umcimbi, kwaye bafumane ukuba bacele ukuba bashiye iConven.
Kuza kubakho umgaqo oqinileyo wobumfihlo phakathi kweCandelo leSigqeba esiThathu. Akukho nxalenye inokubhengeza ishishini leConven kunoma ubani ngaphandle kweqela. Oku kubandakanya amagama amanye amalungu eConven, imisebenzi yemveli kunye nolwazi lokudibanisa.
Amalungu akaze afunwa ukuba ahlawule umrhumo wobulungu kwiCandelo leSigqeba esiThathu. Umnikelo uhlala uyamkeleka, kodwa awuzange ufune.
Indlela yokushiya iConven
Masijamelane nalo, ngamanye amaxesha abantu bajoyina iqela kwaye akuyona into efanelekileyo kubo. Ingcinga efanelekileyo yokuquka umgaqo-nkqubo malunga nendlela umntu angashiya ngayo , okanye ahluke kuyo, iqela lakho. Nokuba ngaba yinto nje yokuthi bahlehlise kwaye bakuxelele ukuba abayibuya, bayibhale phantsi.
UkuQeqesha, iMigangatho, kunye neMfundo
Ukuba iqumrhu lakho libonelela ngeSigqeba seMigangatho kumalungu ayo, kuya kufuneka ukuba uchaze ukuba ngamalungu angaphi na amazinga ahlukeneyo. Yintoni efunekayo kwiDriki ngalinye? Ngaba kukho ixesha - ubuncinane okanye ubuninzi - apho umntu angayifumana iMigangatho? Ngaba amalungu aya kufuneka abekho kwiiklasi ezithile, nokuba ngaphakathi okanye ngaphandle kweentlanganiso zeConven? Ngaba amalungu alindeleke ukuba afunde ngokwabo, okanye ngaba yonke imfundo iya kwenzeka ngaphakathi kweqela?
Ngoxa le nto ayimfuneko kakhulu, yinto efanelekileyo yokufaka iphepha elibonisa, ngokubanzi, oko ukulindele kumalungu. Ukuba bayayisayinela, oko kubonisa ukuba bayaqonda oko kuya kufunwa kubo, kwaye abanakubuyela emva kamva bathi babengazi ukuba bafanele benze ntoni.
Imizekelo yezinto ezibandakanya:
Mna, njengelungu leZithathu zeConcle Coven, ziya kuthatha inxaxheba kwiiklasi, iinkcubeko kunye neminye imihango kunye neqela.
Ndiya kugcina imithetho kunye nemithetho yeCandelo leZiThathu zeeNgqungquthela.
Ndiyathembisa ukuxhasa imisebenzi yeConven nge-energy, iminikelo, okanye ezinye izibonelelo njengoko kuyimfuneko, ngelixa ndibeka phambili kwiimfuno zam intsapho kunye nokuphila.
Ekugqibeleni, qinisekisa ukuba ugcine ikopi yemithetho yakho yemigaqo ekhoyo kuwo onke amalungu eqela lakho. Wonke umntu kufuneka abe nekopi ekhoyo, kwaye kufuneka ube neyodwa ongayibhekisela kuyo xa kuvela umbuzo.
Akulungele ukwenza i-coven? Zama ukuqala iqela lokufunda lobuPagani endaweni yoko!
14 Izixhobo Zomlingo Ngezenzo Zengqungquthela
Ingqungquthela kaMeyikazi kaMeyi
Isivumelwano Esidala kunye noMnqophiso Omtsha
Ziziphi iIqhingi eziLwandle oluKhulu kunye neeSilasana ezincinci?
Isikhokelo soMyalelo oCwangcisiweyo ngokukodwa
Ngaba izazinzulu zesazi zibona i-Sping spider?
Ukubhala Intetho Ephumelelayo
Izinto ezili-10 zokumazi ngo-Andrew Jackson